Kuvaliwe I-Loop Cooling Tower: Imboni Yezemithi
Imijikelezo eshisayo ibalulekile Embonini Yezemithi, yingakho sidinga imishini yokususa ukushisa okungadingeki kusuka enkambisweni noma ukudlulisa ukushisa kweminye imithombo yezindaba ukuze isetshenziswe ngokuqhubekayo.
Ukushintshana ngokushisa kuyingxenye ebalulekile yenqubo yokwenziwa kwamakhemikhali nemithi emihle. SPL yenzaUmbhoshongo opholisayo, i-Hybrid Cooler ne-Evaporative Condenser Izinsiza kusebenza zenzelwe ukusebenza ngaphansi kwezimo ezikahle zenhlanzeko nangokuhambisana Nemikhuba Emihle Yokukhiqiza. Kudinga ukuhlanganiswa futhi kusebenze kahle, kepha kulula ukuyihlanza nokuyigcina. Uhla lwemikhiqizo ye-SPL ligcwalisa lezi zidingo nokuningi. Kanye nokuqinisekisa ukusebenza okuthembekile, izixazululo zethu zisiza ukubuyisa ukushisa ukwenza izinqubo zonge kakhulu.
Ezinye zezinqubo zokhiye zokwenziwa kwemithi ezidinga isistimu yokupholisa esebenza kahle:
•Ukuqhutshwa kweqoqwana kuziphenduli ezinhlobonhlobo, Okuyinto kudinga lwaluyophola amanzi zamakhemikhali ngamazinga ashisa kakhulu kanye crystallization imikhiqizo yokugcina ngaphansi kwamazinga okushisa aphansi
•Amafutha okupholisa ngaphambi kokuthela nokupakisha
•Ukulawula izinga lokushisa kwenqubo yokubumba lapho kwakhiwa i-gelatin yamaphilisi.
•Ukushisa nokupholisa okulandelayo kwezingxenye okhilimu ngaphambi kokuba bahlanganiswe
•Ukushisa nokupholisa ngesikhathi sokuvala inzalo yemithi yokwenziwa ketshezi
•Amanzi asetshenziswe kwinqubo ye-granulation emanzi yokwakha ithebhulethi